I-Tusk Casino Sportsbook% yamanjeye% - 100% Ibhonasi Yediphozithi Yomdlalo
Ikhaya / isibuyekezo se-tusk casino sportsbook
Isibuyekezo se-Tusk Casino Sportsbook
Isoftware: INetEnt, Spigo, Booongo, Microgaming, Asia Gaming, Pragmatic Play, Evolution Gaming, BetSoft, Platipus, Play’n GO nokuningi.
Izimali: Amarandi aseNingizimu Afrika (i-ZAR), iBrazil Real, amaDola aseCanada, ama-Euro, amaRupe aseNdiya, iPeso laseMexico, iNorway Kroner, iNew Zealand Dollar ne-US Dollar.
Ukubheja okuncane / okuphezulu: Ukubheja okuncane nokubheja okuphezulu kuyahluka ngokuya ngomcimbi wezemidlalo. Uzokwaziswa uma inani lakho lokubheja lingekho ngaphakathi kwemingcele eyamukelekayo owenza ukubheja futhi uzokwaziswa nokuthi imingcele incike kuphi ekubhejeni onakho kusiliphu sokubheja.
Ibhonasi Yokwamukelwa: Ibhonasi yediphozithi engu-100% efinyelela kwisamba semali ephezulu ku-R25,000 kwidiphozi yakho yokuqala e-Tusk Casino sportsbook.
Isilinganiso: 4.5 / 5
I-Tusk Casino and sportsbook iyatholakala kubadlali abavela ezifundeni ezahlukahlukene zomhlaba balindele izindawo ezithile ezivinjelwe. Ipulatifomu isekela izinhlobo eziyishumi zezimali ze-fiat. Abadlali bangakhetha imali yabo ye-fiat abayithandayo ngenkathi besabhalisela i-akhawunti. Le sevisi yokubheja eku-inthanethi futhi isekela i-cryptocurrency Bitcoin enkulu ngokuhlanganisa nangokusebenzisana nezinsizakalo ezahlukahlukene ze-crypto wallet ezifana ne-Quickbit. Kubonakala kunokugxila okucacile ezimakethe ezithile ezahlulela ngezimali ezisekelwayo, okunikezwayo, imikhakha yezemidlalo kanye netimu. ITusk Casino igcizelela izimakethe zamakhasino ezivela ku-inthanethi ezifana neNingizimu Afrika, India, Canada, Finland, Kenya, New Zealand, Nigeria, Norway ne-Germany.
Uma njengamanje ufuna ipulatifomu engaphatha ukubheja kwezemidlalo nokubheja amakhasino, iTusk Casino kungaba yindlela ethembisayo. Kulesi sibuyekezo esinemininingwane, sizothulula wonke ubhontshisi eTusk Casino ukuze ube nalo lonke ulwazi olusizayo ukwenza izinqumo ezifanele ngezidingo zakho zokudlala nokubheja.
Esikuthandayo nesicabanga ukuthi kungaba ngcono:
Ukubhejela ezemidlalo, ukubheja kwezemidlalo bukhoma, imidlalo yekhasino kanye nemidlalo yokudlala yekhasino yomthengisi bukhoma enikezwa ngaphansi kwesikhulumi esisodwa Alukho uhlelo lokusebenza lweselula olungalandwa kunoma yiziphi izinkundla zokusebenza kweselula
Iwebhusayithi yeTusk Casino inobungani futhi iyadlala ngokushesha ukuze ukwazi ukuyifinyelela kunoma iyiphi idivayisi yeselula noma ngabe usendleleni Uhlelo lwe-VIP lubonakala luthandeka kubadlali bekhasino hhayi kubathengi bezemidlalo
Izigaba / izimakethe ezicishe zibe ngamashumi amathathu ezahlukahlukene ongabheja kuzo Ingxenye yesikhungo sosizo yewebhusayithi isabonakala njengomsebenzi oqhubekayo
Ukubheja kuma-Esports afana ne-Counter Strike, i-Dota 2, i-League of Legends, i-StarCraft 1 namanye amaningi
Izimali ze-fiat eziyi-10 namaBitcoins asekelwayo
Amaphromoshini anenzuzo ngokunikezwa okuzinikele kwesigaba sezemidlalo
Isipiliyoni sokubheja okulula ngomqondo we-betslip enembile
Iwebhusayithi isekela izilimi ezi-6 ezihlukene
Ukwesekwa kwamakhasimende kuyatholakala ku-24/7 nangamapulatifomu amaningi wokuxhumana
Ukugembula emicimbini yezemidlalo, imidlalo kanye nemidlalo okwamanje edlalwayo
Izinhlobo Zamabhonasi Atholakala e-Tusk Casino
Ezemidlalo ibhonasi lokwamukela -Isigaba sama phromoshini e-Tusk Sport sinenketho yokuhlunga lapho ungabuka khona kuphela amabhonasi ekhasino athile noma amabhonasi athile wezemidlalo. Uma uchofoza kuthebhu ‘Yezemidlalo’, kuneminikelo emibili esebenzayo ngalesi sikhathi, okungukuthi, ukubheja kwezemidlalo ibhonasi yokuqala yediphozi kanye nebhonasi yokulayisha kabusha ukubheja kwezemidlalo. Ibhonasi yokuqala yediphozi ingabhekwa njengebhonasi yokwamukela ezemidlalo. Ngokuzithoba kwalo mnikelo, lapho ufaka imali yakho yokuqala eTusk Casino bese ukhetha ukusebenzisa le bhonasi, uzothola umentshisi ka-100% kuze kufike ku-R2500. Ngakho-ke, uma wenza idiphozi yokuqala ka-R100, ngokwesibonelo, uzothola enye i-R100 eyengeziwe njengebhonasi. Idiphozi encane edingekayo ukuthola le bhonasi ingu-R25 bese kuthi ibhonasi enkulu ibekelwe uR2500. Inani lebhonasi lingaphansi kwesidingo sokubheja esingu-7x 1.70 ngokubheja okukodwa (konke ukubheja kwe-accumulator kufanele kube namathuba amancane okungenani angu-1.50 noma ngaphezulu). Isidingo sokubheja kufanele sigcwaliswe ezinsukwini eziyi-7.
Ibhonasi lokwamukela e-Casino – Abadlali abanentshisekelo ekudlaleni amakhasino bangafuna ibhonasi yamukelwa ekhasino kwidiphozi yabo yokuqala e-Tusk Casino. Lapha, uzothola umdlao omeshayo we-100% kuze kufike ku-R5000 kanye ne-100 spins yamahhala. Idiphozi encane edingekayo ukuze ufanelekele le bhonasi okungenani ingama-R50 kanti inani eliphakeme lebhonasi lilinganiselwe kuma-R5000. Uzothola ispin samahhala esingu-1 ngawo wonke ama-R20 uma nje wenza okungenani idiphozi engu-R100 noma ngaphezulu. Izikhulu zamahhala ongazinikezwa zikhawulelwe kuma-spins wamahhala we-100.
Ibhonasi yediphozi Engekho
Njengamanje, iTusk Casino ayinikeli ngebhonasi yediphozithi.
Amabhonasi we-VIP & High Roller
Abadlali beCasino bangasebenzisa uhlelo lwe-VIP kule nkundla yokubheja eku-inthanethi. Lapho usufanelekile ukuba ngumdlali we-VIP, udinga ukugcina isimo sakho se-VIP ngokulandela ukuthi wenze imali eyanele futhi udlale njalo ekhasino. Umdlali we-VIP angabheka phambili ezinzuzweni ezifana nomphathi we-akhawunti yangasese, amabhonasi angenamkhawulo nsuku zonke, masonto onke nangenyanga, amaphakheji eholide, amawashi okunethezeka nama-smartphones aphezulu, njll.
Njengamanje, i-Tusk Casino ayinikeli ngamabhonasi wamahhala wokubheja.
Ukubheja Kwezemidlalo ibhonasi ephindiwe :
Ukuphela kokunyusa okugxile ekubhejeni kwezemidlalo okutholakala ngaphandle kwebhonasi yokwamukela ibhonasi yokuphinda ulayishe ukubhejela ezemidlalo. Ngenxa yalokhu kunikezwa, ababhejeli bezemidlalo bangalindela ukuthi umdlali okhahlela isikhathi ngasinye uma befaka isikhwama sabo seTusk Sportsbook ngezimali. Empeleni, uzothola ukukhushulwa okungu-10% kwidiphozi yakho kuze kufike ku-R1000. Noma iyiphi imali yebhonasi etholwe ngezilokotho zalo mnikelo ikhonjelwa kuzidingo zokubheja eziyi-7 x 1.7- zokubheja okukodwa (konke ukubheja kwe-accumulator kufanele kube namathuba amancane okungenani we-1.50 noma ngaphezulu). Le mfuneko yokubheja kufanele igcwaliswe ezinsukwini eziyi-7.
Ibhonasi Yekhasino Yokulodwa kabili :
Ibhonasi yekhasino yokulayisha kabusha e-Tusk casino nayo ibizwa ngokuthi ibhonasi yokulayisha kabusha elinganiselwe. Isizathu sokwaziwa njengokungenamkhawulo kungenxa yokuthi awukho umkhawulo wokuthi ufuna kangaki ngosuku lo mnikelo, ungathola le bhonasi ngokoqobo ngayo yonke idiphozi oyenzayo. Le bhonasi inika abadlali u-20% kumadiphozi abo inqobo nje uma imali efakiwe okungenani ingu-R50 noma ngaphezulu. Ibhonasi ephezulu ongayithola ngu-R3000.
Noma yiziphi izimali zebhonasi ezitholwe ngalokhu kunikezwa zizobekelwa imfuneko yokubheja izikhathi ezingama-40. Ngakho-ke, udinga ukubheja nokudlala okungenani izikhathi ezingu-40 inani lebhonasi ngaphambi kokuba ibhalansi yebhonasi ifanele ukukhishwa. Uyacelwa ukuthi uqaphele ukuthi ukubheja kuphela kumageyimu we-slot kubalwa i-100% ekufinyeleleni kwezidingo zokubheja.
Ngabe isipho samahhala sika-R1000 somngani ngamunye omthumelayo sizwakala kanjani? Yilokho kanye ibhonasi yokudlulisela eT-usk Casino ekunikezayo. Qiniseka ukuthi usakaza igama bese wenza abangani bakho babhalise neT-usk Casino. Uma nje umngane ebhalisile, thumela i-imeyili ku-Tusk casino ngegama lomsebenzisi lomngane wakho futhi uma wena mngani wenza idiphozi yokuqala, uzothola ibhonasi engu-100% yomdlalo inqobo nje uma efaka okungenani u-R50 noma ngaphezulu. Ibhonasi ephezulu ongayithola inqunyelwe ku-R1000.
Ngakho-ke, isibonelo, uma uthumela umngane wakho bese ebhalisa bese enza idiphozi yokuqala ka-R200, uzothola ibhonasi engu-R200 ku-akhawunti yakho.
Ngeviki 50% Ibhonasi Yokulayisha kabusha:
Faka idiphozi ngoLwesithathu noma ngeSonto bese uthola ibhonasi yokulayisha kabusha yamasonto onke ukuthola okumesheyo ongu-50% kwidiphozi yakho. Isamba semali yebhonasi ongasithola sinqunyelwe ku-R2000 kanti idiphozi encane edingekayo ukuze ufanelekele lo mnikelo ingu-R50. Ibhonasi inesidingo sokubheja esingu-40x.
Ibhonasi yokubuyisa imali masonto onke:
Uma ufake noma yikuphi phakathi kuka-R3000 kuya ku-R7500 esikhathini esingangesonto, uzothola imali engu-10% yemali yakho oyibuyise ngesikweletu semali esifunekayo esingu-10x.
Uma ufake noma yikuphi phakathi kuka-R7500 kuya ku-R1500 esikhathini esingangesonto, uzobuyiselwa u-15% wemali yakho ngendlela yesikweletu sokubuyisa imali enemfuneko yokudlulisa eyi-10x.
Inani elibuyisa imali lifakwa ku-akhawunti yakho njalo ngeSonto uma kuthiwe uthathwa njengofanelekile.
I-Tusk Casino inikeza izinsizakalo zayo kumalungu abhalisiwe kuphela. Uma ufuna ukubheja kwezemidlalo noma ukudlala imidlalo yekhasino ngemali yangempela, kuyaphoqeleka ukuthi ubhalise. Inqubo yokubhalisa iqondile futhi iyazichaza. Kuyinqubo yesinyathelo ngasinye ebandakanya ukugcwalisa ifomu lokubhalisa ngeminye imininingwane ye-akhawunti, imininingwane yomuntu kanye nemininingwane yokuxhumana. Izinyathelo eziqondile ezibandakanyeka ekubhaliseni i-akhawunti zichazwe ngezansi.
Vakashela iwebusayithi ye-Tusk Casino
Chofoza inkinobho ephuzi ethi ‘Joyina’ etholakala ekhoneni eliphezulu kwesokudla sekhasi lasekhaya
Ifomu lokubhalisa eliyizingxenye ezi-3 lizovela esikrinini sakho
Ingxenye 1 – Ekhasini lokuqala, kuzodingeka ukuthi ulungiselele imininingwane ye-akhawunti njengegama lomsebenzisi nephasiwedi, nekheli le-imeyili. Faka le mininingwane bese uthikha ibhokisi ukwamukela imigomo nemibandela, inqubomgomo yobumfihlo nokuqinisekisa ukuthi uneminyaka engaphezu kwengu-18 ubudala. Siphakamisa ukuthi uphinde uhlole ibhokisi ukuze ubhalisele i-newsletter (yize lokhu kungakhethwa).
Chofoza kuthebhu ‘Okulandelayo’.
Ingxenye 2 – Lokhu kufaka ukuqinisekiswa lapho udinga khona ukufaka inombolo yakho ephathekayo ngesiqalo sekhodi elifanele lezwe bese kuthunyelwa iphasikhodi yesikhathi esisodwa njengomyalezo wombhalo kwinombolo yakho. Faka le khodi yokuqinisekisa kunkambu yokufaka ukuqinisekisa inombolo yakho bese uchofoza ku-‘Qinisekisa ‘.
Ingxenye 3 – Gcwalisa lezi zinkambu ngokunembile nangokuya ngohulumeni wakho ukhiphe imibhalo ye-ID – igama lokuqala, isibongo, khetha ubulili bakho, faka usuku lwakho lokuzalwa, khetha imali, shiya ikhodi ye-ejenti ingenalutho, khetha izwe lakho ekudonselweni phansi imenyu -down, uthayiphe ikheli lakho, idolobha kanye nekhodi yeposi. Khetha omunye wemibuzo yokuphepha kumenyu yokudonsela phansi bese ufaka impendulo yombuzo wokuphepha bese uchofoza ku-‘Regista ’ukuze uqedele ukubhalisa
Idiphozi encane e-Tusk Casino
Idiphozi ephansi eyamukelekayo e-Tusk Casino izohluka ngokuya ngendlela yokukhokha esetshenziswayo. Ngenkathi ezinye izindlela zokufaka imali zingaba nemikhawulo ephakeme yediphozi, ubuncane ezimweni eziningi ngu-R25.
Ungabeka kanjani ukubheja kwakho kokuqala
Inqubo yokubeka ukubheja kwezemidlalo eTusk Sportsbook igqugquzelwe yindlela esetshenziselwa izindawo zokubheja ezisuselwa emhlabeni. Njengoba nje ungenza esitolo sokubheja, ngokuyisisekelo ufaka ukubheja kwi-betslip, ucacise inani lokubheja ukubheja ngakunye bese uqinisekisa ukubheja kwakho ngokukhokha. Noma kunezigaba ezingaba ngu-30 zemidlalo nemicimbi engaphezu kwe-1500 ongabheja kuyo nganoma yisiphi isikhathi, inqubo ihlehlisiwe ukuletha isipiliyoni esilula futhi esisebenziseka kalula. Ngezansi kukhona imiyalo yesinyathelo ngesinyathelo yokuthi ungahamba kanjani ngokubeka ukubheja kwakho kokuqala e-Tusk sportsbook.
Iya kuwebhusayithi yezemidlalo yeTusk Casino bese ungena ngemvume ku-akhawunti yakho ngokufaka igama lakho lomsebenzisi nephasiwedi
Uma usuvele uyazi ukuthi yimuphi umcimbi wezemidlalo ofuna ukugembula kuwo, ungamane uthayiphe igama leqembu noma lobungcweti \_ iligi kubha yokusesha enikezwe ohlangothini lwesobunxele ngenhla nje kohlu lwemikhakha yezemidlalo
Chofoza kumdlalo othize onentshisekelo kuwo ohlwini lwemiphumela enenketho yokusesha
Ngokuya ngokuthi yimuphi umdlalo owukhethayo, uzobona amathebhu ohlobo lokubheja ku-dashboard engakwesokudla. Isibonelo, uma ukhetha umdlalo webhola, ungahle ubone izinketho ezifana nomakhi oyinhloko, wokubheja, izimakethe ezisheshayo, okungeziwe, isigamu sokuqala, uhhafu wesibili kanye nekhombo. Khetha ithebhu onentshisekelo kuyo. Ithebhu enkulu inezinhlobo eziningi zokubheja ezibalwe ngaphansi kwayo
Lapho usukhethe ithebhu, ungachofoza kubhejo elithile futhi lizongezwa ngokuzenzakalela kusiliphu sokubheja. Amathuba okubheja ayaboniswa kanye negama lokubheja. Isibonelo, emdlalweni webhola ungabona ukubheja okubizwa ngeDraw 3.66 okusho ukuthi uma ukhetha lokhu kubheja, uqagela ukuthi umdlalo uzophela ngokulingana futhi uma ukubheja kwakho kunqoba, uzowina izikhathi ezingama-3.66 inani olibhejayo
Ungangeza ukubheja okukodwa noma ukubhejwa okuningi kubhejethi
Ngemuva kwalokho ungafaka inani lesigxobo sokubheja noma ukubheja ngakunye uma uneziningi zazo
Uma usukwenzile lokhu, sikuphakamisa ukuthi ubuyekeze imali yokubheja kanye nenani lesigxobo futhi bese ubheka inani eliphelele lokuwina kanye nengqikithi yokuwina ngaphambi kokuchofoza ukubheja kwendawo
Uma uqhafaza kubhejwa yendawo, inani eliphelele lesiteki elishiwo kubetslip lizodonswa kubhalansi yemali yakho yonke futhi ukubheja kuzoqinisekiswa
Ukuzulazula isayithi Nokusebenziseka Kwayo
Mayelana nokwakhiwa kolwazi, isigaba se-sportsbook seTusk Casino samukele uhlelo olujwayelekile oluku-inthanethi lwe-sportsbook ngama-tweaks ambalwa wokwenza ngezifiso. Lesi sifanekiso esivamile sisetshenziswa amawebhusayithi amaningi we-premium ezemidlalo aku-inthanethi futhi ngaleyo ndlela siza nezinto eziningi zokubona iphethini kubasebenzisi nganoma yisiphi isipiliyoni sokubheja kwezemidlalo ku-inthanethi.
Noma umthamo omkhulu wedatha i-sportsbook kumele ihlale futhi iboniswe nganoma yisiphi isikhathi ngesikhathi inkulu futhi inamandla, ukuhlukaniswa ngezigaba, ukubalwa kwamanani kanye nembudumbudu yale datha kuqinisekisile ukuthi kulula ukusebenza ngayo nabasebenzisi bokugcina. Ngezinkulungwane ezimbalwa zemicimbi yezemidlalo enikelwe ukubheja nsuku zonke, kunezinketho zosesho, izinketho zokuhlunga nezinye izinsiza zokuzulazula ezahlukahlukene ezisebenzisa ukusetshenziswa okusheshayo ngendlela yepragmatic nesikhathi esincane nomzamo osetshenzisiwe.
Noma ungeyena ubuchwepheshe we-tech, ijika lokufunda lapha lihamba kancane futhi libushelelezi. Abadlali bazoqonda inqubo nedeshibhodi ngokushesha nje lapho bebeka ukubheja kwabo kokuqala. Ngokwengeziwe, ukusekelwa kwamakhasimende kumile amahora angu-24 ngosuku nezinsuku eziyi-7 ngeviki uma udinga usizo ekubekeni ukubheja, ukufaka idiphozi, ukukhipha imali noma yini enye ehlobene ne-akhawunti yakho yeTusk yekhasino.
Ikhasino ye-Tusk kuselula
Iwebhusayithi yeTusk yekhasino inobungani obuphathekayo ngokuphelele ngaphandle kwebhokisi ngaphandle kokuthi ulande noma yiluphi uhlelo lokusebenza. Isigaba sekhasino kanye ne-sportsbook kuzosebenza ngaphandle komthungo kuma-smartphone nakumathebulethi, kungaba yidivayisi ye-iOS, idivayisi ye-Android noma iselula ye-Windows. Ukuze ufinyelele ipulatifomu ngedivayisi yeselula, ungaqalisa uhlelo lwakho lokusebenza lwesiphequluli sewebhu (i-Google Chrome noma i-Safari ngokwesibonelo) bese uya ku-www.tuskcasino.com
Ungaqhubeka nokufinyelela i-akhawunti yakho ngokufaka igama lakho lomsebenzisi nephasiwedi. Ezikrinini zeselula, ikakhulukazi ama-Smartphones, abukho ububanzi obanele bokusebenza futhi yonke ingosi ye-sportsbook iboniswa ngokuma okuqonde mpo. Ungapheqa ngokusebenzisa izinketho ezahlukahlukene ngomunwe owodwa futhi uma ufaka ukubheja ku-betslip, isithonjana esingezansi kwesobunxele sizokhomba i-betslip. Ngokungafani nedeshibhodi ye-PC, i-betslip ayibonakali ngaso sonke isikhathi. Ungamane ubeke ithebhu isithonjana ukuze unwebise i-betslip lapho usukulungele ukufaka inani lakho lesiteki futhi uqinisekise ukubheja okufakile. Ukubheja kungafakwa ngokuthepha okukodwa ngendlela efanayo kuwebhusayithi ye-PC.
Izinketho zokubheja nemidlalo enikezwa e-Tusk Casino
Yonke imidlalo nemikhiqizo yokubheja kuyo yonke ipulatifomu ye-Tusk Casino ihlukaniswe kabanzi yaba ngamaqoqo amakhulu amathathu, okungukuthi, i-Live Casino, i-Casino ne Midlalo.
Ukubhejela Ezemidlalo – I-sportsbook iyisengezo sakamuva kungxenyekazi yeTusk Casino, futhi inezinto ezihlonyiswe ngokuphelele ngezici zakamuva, izinketho zokubuka, imisebenzi yokubheja kanye nezindlu ezizungeze izigaba zemidlalo ezi-30 ezahlukahlukene.
Esigabeni ngasinye semidlalo, kunezinhlobo zokubheja ezihlukile. I-betslip inezinketho ezihamba zodwa, eziningi nezindlela zohlelo ngokuya ngokuthi ubheja amangaki nokuthi uwahlanganisa kanjani. Abasebenzisi banekhono lokukhetha ukuthi izingqinamba ziboniswa kanjani – kungaba yingxenye, idesimali noma ifomethi yaseMelika. Ezinye izimakethe ezinkulu zezemidlalo zibhalwe phezulu phezulu ngosizo lwezithonjana, lokhu kufaka phakathi ibhola, ithenisi, ibasketball, i-volleyball, i-hockey yeqhwa, i-e-ezemidlalo, nemiphumela.
I-E-Sports: Ama-Esports athola ukuthandwa ngokushesha futhi ukubheja kuwo sekuyinto ejwayelekile phakathi kwabalandeli be-Esports abashisekayo. Le yimidlalo yevidiyo edlalwa ngochwepheshe futhi isakazwa bukhoma emhlabeni ngokusebenzisa izinkundla ezahlukahlukene zokusakaza. Ku-Tusk sportsbook, ungabheja emiphumeleni yemidlalo enjalo ye-E-sports noma imincintiswano. Izibonelo ezimbalwa zifaka phakathi iFIFA, iCounter Strike, iDota, njll.
Ukubhejela Ezemidlalo Okubukhoma – Isici sokubheja bukhoma siyasekelwa futhi sinikezwa e-Tusk Casino. Lokhu kubandakanya ukuthi ukubheja kungabekwa kumdlalo noma kumdlalo yize umdlalo othile usuvele uqhubeka futhi uhlala, inqobo nje uma ungapheli. Kodwa-ke, ezinye izimakethe zokubheja kungenzeka zingatholakali ngesikhathi sokubheja bukhoma. Isibonelo, uma ufisa ukubeka ukubheja kumdlalo webhola osuvele usengxenyeni yesibili, ukubheja okuncike kuphela esiwombeni sokuqala ngeke kusatholakala. Yonke imidwebo ebukhoma inamathiselwe ithegi ebomvu ‘ebonakalayo’ ebonakalayo.
Imidlalo Yekhasino – Ipulatifomu ye-Tusk yethulwe okokuqala njenge-inthanethi ikhasino eku-inthanethi ngo-2020. Yize inkundla manje isinwebile ukuthi ifake i-sportsbook, isigaba sekhasino ngokuqinisekile asikazitshwa. Kukhona imidlalo engaphezu kuka-3000 yekhasino evela kubahlinzeki abaphezulu abangama-50 + njengeNetEnt, iMicrogaming neminye eminingi. Ikhasino likhaya lemidlalo ehlukahlukene ebandakanya ama-slots, ama-jackpots, imidlalo yetafula, i-poker, kanye nesigaba somthengisi bukhoma lapho ungadlala nabathengisi abangabantu bangempela ngokusakazwa bukhoma, kwencazelo ephezulu yevidiyo.
Inani elincane lokuhoxa
Inani Elikhulu Lokukhipha
Skrill Mahhala 24 - 48 Amahora €/$15 €/$5000
MuchBetter Mahhala 24 - 48 Amahora €/$20 €/$4000
PayRetaliers Mahhala 24 - 48 Amahora $15 / 100 R$ $5000 / 25000 R$
Coincorner Mahhala 24 - 48 Amahora €500 €/$5000
Interac Mahhala 3 - 5 izinsuku zebhizinisi 50 C$ 5000 C$
Instadebit Mahhala 3 - 5 izinsuku zebhizinisi 50 C$ 7000 C$
BankIntl Mahhala 5 - 7 izinsuku zebhizinisi €/$500 €/$100000
BankLocal Mahhala 5 - 7 izinsuku zebhizinisi R1000 R25000
Ungayikhipha Kanjani Imali?
Chofoza kusithonjana se-cashier
Faka imininingwane yokuhoxa, imali ne zwe
Chofoza u-‘Khipha ’ukuze uqinisekise
Qhubeka njengokucelwa kwesikrini kuze kube yilapho isicelo sokuhoxiswa sibekwe ngempumelelo futhi uthola umyalezo onomphumela ofanayo
Izindlela Zokufaka Idiphozi
Inani Elincane Lediphozithi
Inani lediphozithi elikhulu
Visa Mahhala Phuthumayo €/$10 / R25 €/$1000
MasterCard Mahhala Phuthumayo €/$10 / R25 €/$1000
Skrill Mahhala Phuthumayo €/$15 €/$5000
MuchBetter Mahhala Phuthumayo €/$15 €/$8000
NeoSurf Mahhala Phuthumayo €/$10 €/$1500
AstroPay Card Mahhala Phuthumayo €/$20 €/$5000
Callpay Mahhala Phuthumayo R50 R8000
Boleto Mahhala Phuthumayo 50 R$ 2000 R$
PayRetaliers Mahhala Phuthumayo $15 / 50 R$ $5000 / 25000 R$
Rapid Transfer Mahhala Phuthumayo €/$15 €/$5000
Coincorner Mahhala Phuthumayo 10 C$ €/$5000
Interac Mahhala Phuthumayo 10 C$ 10000 C$
Instadebit Mahhala Phuthumayo 10 C$ 10000 C$
Ungayenza kanjani Idiphozithi
Khetha indlela yokufaka imali
Faka imininingwane yokukhokha, imali nemali
Qhubeka kuze kuvunyelwe ukuthengiselana bese uthola umlayezo osho kanjalo
Ulwazi Lokusekela Amakhasimende
Izinombolo Zocingo Zokusekela: Azikho
I-imeyili: Gcwalisa ifomu lokuxhumana elisheshayo kuwebhusayithi bese ushaya ukuthumela
Ingxoxo Esheshayo:I Iyatholakala amahora angu-24
Imithombo Yezokuxhumana: Akukho okubalwe kuwebhusayithi esemthethweni
Mayelana ne-Tusk Casino
I-Tusk Casino yaqala ukwethulwa ngo-2020 futhi izinsizakalo zayo okwamanje zazilinganiselwe kumageyimu we-casino aku-inthanethi. Manje, esikhathini esingaphezu konyaka kamuva, i-Tusk Casino yethule incwadi yayo yezemidlalo lapho amalungu angabheja khona emicimbini ehlukahlukene yezemidlalo namaligi avela emhlabeni wonke. Kusukela namhlanje, amalungu e-Tusk Casino abhalisiwe anakho ukufinyelela kokubili imali yemidlalo yasekhasino nokubheja kwezemidlalo nge-akhawunti eyodwa, ngeplatifomu efanayo. I-Tusk Casino inelayisense futhi ilawulwa yi-Curacao eGaming Authority.
Njengoba sesibeke i-Tusk Casino enqubweni yokuhlola nokubukeza esheshayo, singafakazela leplatifomu ngokuzethemba okukhulu. Kunamakhinki ambalwa adinga ukukhishwa, kepha lawa akuwona aphula isivumelwano, angukuphazamiseka okuncane. Ngasohlangothini oluhle, leplatifomu inetimu enhle ephefumulelwe yaseNingizimu Afrika, ukwakheka okusebenzayo kuwo womabili ama-PC nakumakhalekhukhwini futhi inikezela ngemidlalo ephelele yemidlalo yasekhasino kanye nokubheja kwezemidlalo kusixhumi esibonakalayo esisodwa esisebenziseka kalula. Ngokuqinisekile singancoma iTusk Casino ne-sportsbook kubafundi bethu ngaphandle kokucabanga okwesibili.
Ngabe i-Tusk Sportsbook ingumkhonyovu?
I-Tusk sportsbook iyinsizakalo yokugembula eku-inthanethi enelayisense futhi yonke iminikelo yabo injengemigomo namazinga okulawula. Kukhona amawebhusayithi amaningi okukhwabanisa kwi-intanethi, kepha siyajabula ukubika ukuthi iTusk Casino akuyona enye yazo. Le yipulatifomu esemthethweni, ephephile futhi engenzeleli ekhuthaza nokugembula okufanele.
Ngabe i-Tusk Sportsbook inezinkokhelo ezisheshayo?
Ijubane lapho kwenziwa khona imali likhipha imali lizohluka ezintweni ezimbalwa. Okokuqala, indlela yasebhange esetshenziswayo izonquma ukuthi isikhathi esinqunyiwe sokulungisa imali singakanani futhi okwesibili, isimo sokuqinisekisa se-akhawunti yakho naso singadlala indima ekutheni isicelo sokuhoxiswa sivunyelwa futhi sithunyelwe ngokushesha kangakanani. Ngokuvamile, ukuhoxa kwe-e – wallet kunikeza izikhathi ezisheshayo zokuguqula isimo.
Ngabe i-Tusk Sportsbook iyayamukela i-ZAR?
Yebo, i-Tusk Casino yamukela iZAR nezinye izinhlobo zemali ezidumile.
Ngiyikhipha kanjani imali e-Tusk Sportsbook?
Ukuze ucele isihoxiso: –
Faka imininingwane yokuhoxa, imali nemali
Ngiyidala kanjani i-akhawunti e-Tusk Sportsbook?
Ukwakha i-akhawunti kulula futhi kungenziwa ku-PC noma kuselula. Vele uvakashele iwebhusayithi yeTusk sportsbook bese uqhafaza kusithonjana esithi ‘Joyina’. Ifomu lokubhalisa elivelayo lizovela futhi ngemuva kokugcwalisa leli fomu bese ulithumela, i-akhawunti yakho iyavulwa.
Ngibheja kanjani e-Tusk Sportsbook?
Ukubeka ukubheja e-Tusk Casino kuzobandakanya ukufaka ukubheja kwakho ku slip sakho sokubheja, ukufaka inani lesiteki ofuna ukubheja ngalo bese uqinisekisa ukubheja / ukubheja kubetslip ngokwenza inkokhelo.
Ngingadlala imidlalo ebukhoma e-Tusk Casino?
Yebo, i-Tusk sportsbook ivumela amalungu ayo ukuthi abheje emicimbini ethile yezemidlalo noma ngabe umcimbi usuqalile. Uma nje umdlalo noma umdlalo ungakapheli, izinhlobo ezithile zokubheja zisengathathwa. Uhlobo olunjalo lokubheja lubizwa ngokuthi – ukudlala ukubheja noma ukubheja bukhoma futhi amathuba okubhejwa anjalo ayavuselelwa futhi avuselelwa kaningana ngomzuzu ngokuya ngenqubekela phambili nokulinganisela kwendlela okwenzeka ngayo.
Ingabe i-Yebo, imenyu enkulu yethebhu phezulu kuwebhusayithi yeTusk Casino inesigaba se- 'Live Casino' lapho uzothola khona imidlalo eminingi yetafula ebukhoma njenge-roulette ebukhoma, i-blackjack ebukhoma, njll.Tusk Casino inikela ngemidlalo yomthengisi bukhoma?
Yebo, imenyu enkulu yethebhu phezulu kuwebhusayithi yeTusk Casino inesigaba se- ‘Live Casino’ lapho uzothola khona imidlalo eminingi yetafula ebukhoma njenge-roulette ebukhoma, i-blackjack ebukhoma, njll.Le midlalo ebukhoma yabathengisi itholakala kuma-studio womdlalo aphezulu aphezulu njenge-Evolution Gaming, betgames.tv, NetEnt, Microgaming, Vivo Gaming, njll.